" Dia hiaro anao ny fisainana mazava, ary hiambina anao ny fahasalamana." Ohab.2:11.
Ambarao amin-kery ny finoanao, amin’ny alalan’ireo teny mendrika ataonao sy ny asanao tsy miovaova, ny fanajanao ny hafa ary ny fitiavam-bavakao mafana. Asehoy tsy amim-pisalasalana fa i Kristy no ho eo amin’ny seza fiandrianan’ny tempolin’ny fanahy, ary apetraho tsy misy fepetra eo an-tongony ny talentanao mba hampiasaina hanompoana Azy (...) Ataovy lalàna eo amin’ny fiainanao izany ka tsy hisy fakam-panahy na tombontsoanao manokana hamily anao tsy hanome voninahitra an’Andriamanitra. - YI, 2 Febroary 1893.
Amin’izao vaninandro haingam-pandeha sady anjakan’ny faharatsiana izao, dia tsy azo antoka ny aminao raha tsy voaaro ianao. Tsy fahita firy ny fahatsaran-toetra sy ny fahatsorana. Miantso anareo mpanara-dia an’i Kristy sady miseho ho izany aho mba holalainareo ny vatosoan’ny fahatsorana, lafo vidy sady tsy taka-bidy. Izany no hiaro ny fahatsaran-toetra. - CG, t. 417.
Tsy hitarika na oviana na oviana amin’ny asa tsy masina ny fahamasinan’ny fo (...) Tsy mampietry na oviana na oviana ny mpandray azy ny fahamarinana avy any an-danitra (...) Vao mainka aza manamasina ny mpino izany, mampitombo ny fitiavany ny zava-tsoa, sy azy ary mampifandray azy akaiky amin’i Jesôsy. Mitarika azy handinika ilay baikon’i Paoly apôstôly mba hifady ny fanao ratsy rehetra izany, ndrao «hitenenana ratsy ny fahasoavana azony.”
Olana tokony hojerentsika manokana io. Tsy maintsy miaro tena amin’ny otan’ity taranaka mitontongana ity isika. Tsy maintsy alavirintsika izay rehetra miendrikendrika fahasahisahiana tafahoatra. Melohan’Andriamanitra izany. Tany voarara tsy azo ametrahana ny tongotra izany. Ny teny sy ny asa tsirairay avy dia tokony hanandratra sy hanatsara ary hahamendrika ny toetra. - TFC 5:593,594.
Ny laza soa ananako dia harem-be mihoatra lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy. Aoka harovako tsy ho vasoka izany. Raha misy olona manamavo izany laza izany, dia tsy noho ny namelako azy hanao izany fa noho ny fitenenany ratsy an’i Kristy. Halan’izy ireo mantsy ny fahadiovana sy ny fahamasinan’ny toetrany satria nanameloka azy ireo mandrakariva izany. - TFC 5:595.